Noho ny fiakaran’ny rano: potika tanteraka ny fiompiana sy ny fambolena | NewsMada
Noho ny fiakaran’ny rano: potika tanteraka ny fiompiana sy ny fambolena
Ankoatra ny olana sosialy isan-karazany, faharavan’ny trano, sns, olana iray goavana vokatry ny fiakaran’ny rano, ny herinandro lasa teo, ny fikatsoan’ny fihariana rehetra any ambanivohitra.
Tsy misy faritra afa-bela ireo rehetra tratran’ny fiakaran’ny rano : tanimbary sy voly hafa, fiompiana, famatsiana herinaratra tsy mandeha, lalana tapaka. Saika hitovian’ny kaominina ambanivohitra maro, toy ny any amin‘ny faritra Boeny ny faharavan’ny fiharian’izy ireo. Ankoatra ny voly vary, katsaka, mangahazo, voanjo, vomanga … ravan’ny rano daholo, izay tokony hiakatra afaka iray na roa volana sisa. Toy izany koa ny fiompiana, betsaka ny omby, kisoa, akoho amam-borona, lasan’ny rano.
Tsy misy solika tonga any amin’ny Jirama noho ny lalana tapaka ; na ireo olon-tsotra manana milina mamokatra herinaratra aza sahirana, noho izay fahatapahan-dalana izay, satria tsy tonga ny solika. Mikatso tanteraka ny seha-pihariana hafa, toy ny fitaterana, ny varotra, tsy misy na kely sisa ny tahiry tavela. Tsy ilaozan’izay mpanararotra ny mampiakatra ny vidin’ireo entana fampiasa andavanan’andro ireo (PPN).
Any amin’ny faritra Boeny ihany, kaominina Madirovalo, Ambato Boeny, sarotra ny ahitana labozia sy afokasika, mba tsy hilazana hoe tsy misy ; toy izany koa ny siramamy. Ny mpamongady lehibe manana ireo karazana PPN, simba avokoa vokatry ny fiakaran’ny rano. Mbola tapaka ny lalana amin’izao fotoana izao, tsy afahan’ireo mpamongady mivezivezy. Tsy vitsy amin’izy ireo koa milaza ny fatiantoka mahazo azy, noho ny tahirim-barotra teo aloha simban’ny rano.
Mila politika mazava sy lavitrezaka
Nandalo tany an-toerana moa ny filohan’ny repoblika, nampanantena hanavotra ireo tantsaha ireo, hamatsy masomboly, rehefa voaray ny tatitra ataon’ireo tompon’andraikitra samihafa. Ny amin’ny fambolena aloha izay fa mbola tsy fantatra mazava ny amin’ny fiompiana. Ny olana ho an’ny tantsaha malagasy, ny tsy fananana fiantohana amin’ny loza voajanahary toa ireny. Mila hamaritana politika mazava sy lavitrezaka ny tantsaha eo amin’ny fotodrafitrasa, indrindra ny lalana sy tohodrano ho fiarovana ny fambolena sy ny fiompiana.